Ngwunye mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na mmiri na-ekpo ọkụ
Ngwa maka Ọkụ na-eme ka ike gwụ mmiri nke nwere udi nkpuru ahihia ma obu nke akwuru ahihia. Ngwaọrụ nwere sistemụ na-agba okirikiri yana sistemụ kpo oku na-ekpo ọkụ. Ezubere usoro nkwado ntụgharị iji kwado mmiri n'oge opupu ihe ubi na-ekpo ọkụ site na sistemụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ. Na induction usoro oku nwere ntinye eriri igwe nwere eriri igwe. Usoro eriri igwe nwere mpaghara oghere ahaziri iji nweta oge opupu ihe ubi na ikpo mmiri ahụ mgbe a na-akwado mmiri na usoro nkwado ntụgharị.
A na-eji mmiri na-agba mmiri ma ọ bụ na-agba ahịhịa site na nrụrụ dị ọkụ nke profaịlụ nchara. N'ihi njirimara nke nchara opupu, enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ikpo ọkụ na oge n'oge usoro kpo oku. Ewezuga ikpo ọkụ tupu ị gbanye n'ime eriri mmiri ma ọ bụ na-agbanye akwụkwọ n'ime isi mmiri, enwerekwa arịrịọ ndị ọzọ nke ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche, dị ka eriri eriri mmiri na-agbakwunye, na ntinye oghere nchara. Inwe njirimara nke kpo oku ngwa ngwa, mechie ngwa ngwa, njikwa ike njikwa ziri ezi, ma dịgasị iche iche, HLQ itinye n'ọkwa kpo oku ike ọkọnọ dị nnọọ mma maka nrụrụ nrụrụ ọkụ nke mmiri nchara, ọkachasị na ụlọ ọrụ akpaaka na-emetụta isi mmiri ma ọ bụ na-ebu osisi na-ebu mmiri. E site ọkachamara na HLQ, anyị itinye n'ọkwa kpo oku ha niile kwadebere nke ọma na uru nke ịchekwa ike, mbido ngwa ngwa / nkwụsị, oge elekere elekere 24, ikike dị elu, nnukwu akpaaka, arụmọrụ dị elu, mmezi dị mfe, na ndụ ogologo oge. Ndị ahịa anyị na-amata ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na-amata ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mmiri.
Ngwongwo ihe na-agba ume nke ígwè bụ usoro eji arụ ọrụ na mmiri. Otu usoro nhazi obi ike na-agụnye ọkụ ọkụ nke ikuku. Usoro nhazi dị otú a na-adị nwayọ nwayọ. E nwere ike isi mmiri mepụta mmiri (dika igwe anaghị agba nchara, carbon steel, alloy steel, wdg). Mgbe metal nke mmiri na-ekwesị obi tara mmiri na n'obi, kpọmkwem metallurgical kwa dị ka ekweghị ekwe na Micro-Ọdịdị nwere ike nweta.
Mgbe olulu mmiri nke ikuku mmiri gbasiri ike, a na-ebute mmiri ahụ n'ime oven etinyere na ọnọdụ ụfọdụ maka oge ụfọdụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ewepụ oge opupu ihe ubi ma na-anyụ mmanụ ma ọ bụ na mmiri ya ọzọ. Mgbe usoro mmezi mbụ a, isi ike mmiri na-adịkarị elu karịa ka achọrọ. Dị ka ndị dị otú a, a na-etinye mmiri n'oge a usoro iwe ọkụ ruo mgbe mmiri ahụ nwetara ihe anụ ahụ chọrọ. Mgbe oge opupu ihe ubi na-arụ ọrụ nke ọma, a gbanwere ụfọdụ ngwongwo kristal nke nchara ahụ ka ọ bụrụ martensite nke nwere ọtụtụ carbides gbazere iji nye isi ihe achọrọ mmiri na isi ike mmiri.
Usoro ọzọ a na-eji eme ka mmiri sie ike bụ itinye n'ọkwa kpo oku. Usoro ntinye oku na - eme site na inabata ihe electromagnetic na ihe na - eduzi mmiri. A na - emepụta mmiri Eddy n'ime ihe na - eduzi ihe nke na - eduga na Joule kpo oku. Enwere ike iji kpo oku kpo oku iji kpoo nchara ya na ebe agbaze ya ma oburu na odi nkpa nke kariri nke zuru oke iji mepe ahia a.
Usoro ikpo ọkụ nke na-ekpo ọkụ nwere ike inye oge ọkụ ọkụ ngwa ngwa karịa ikpo ọkụ site na ọkụ ọkụ ọkụ nke oge ochie, na usoro ikpo ọkụ na-emepụta ihe nwere ike ime ka njikwa ihe nke mmiri dị mfe, ma nwee ike ime ka akpaaka na-arụ ọrụ nke ihe mmiri n'oge opupu ihe ubi. Agbanyeghi na kpo oku oku nwere otutu uru karie oku nke ikuku nke uwa, ikpo oku nke ihe omuma nwere nsogbu na iweta oge opupu ihe ubi ogologo oge opupu ihe ubi, ikpo oke oku nke oge opupu ihe ubi, na ijigide induction kpo oku arụmọrụ.
Categories Technologies Tags zụọ onye na-ekpo ọkụ mmiri, hardening mmiri kpo oku, itinye n'ọkwa kpo oku, induction kpo oku, induction mmiri hardening, induction mmiri okpomọkụ, induction mmiri kpo oku, metal mmiri itinye n'ọkwa okpomọkụ, mmiri hardening, mmiri kpo oku, elu hardening mmiri Mail igodo